IApartment yangoku, eKhanyayo kunye neTolo - I-Airbnb
IApartment yangoku, eKhanyayo kunye neTolo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJelena
Ifakwe kweyona ndawo idumileyo yokuhlala kwisixeko sasePodgorica, le ndlu yangoku isanda kufakwa iya kukunika ngaphezulu kunokuba kufuneka ube namava ongalibalekiyo kwesi sixeko. Ilungele ukuhlala okufutshane okanye ixesha elide nokuba ishishini okanye injongo yokuzonwabisa. Ifanelekile kwabo bafuna ukuchitha ixesha kwindawo ezolileyo, kodwa basondele kuzo zonke iindawo ezibalulekileyo ePodgorica.
Le ndlu ikwisakhiwo esitsha kraca (2021) kumgangatho wesibini. Indlu ijonge emazantsi kwaye inokukhanya okuninzi kunye nomoya omhle kakhulu.
Sinike konke okusemandleni ethu ukwenza indlu ibe ntle, kwaye sizame ukuqinisekisa ukuba zonke iinkcukacha zikwindawo-ukuqalela kwikhitshi eliyilwe kakuhle langoku elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa etofotofo kunye nejingi ekulungeleyo ukuphumla, igumbi lokulala elinendawo yokutyela. ukhululekile isilili ubungakanani ukumkani leyo yahlulwe iibhedi ezimbini single. Ibalcony enkulu ilungile ukuba ube neti yasekuseni ezolileyo okanye ikofu.
Kukwakho nomabonakude weLCD onezitishi eziyi-150+, i-intanethi ye-optical ekhawulezayo-uqhagamshelo nge-WiFi kunye ne-AC (imeko yomoya) kwigumbi lokulala ngokunjalo nakwigumbi lokuhlala. Zonke iitawuli eziyimfuneko kunye neelinen zokulala zihlala zibonelela zintsha kwaye zicocekile! Ukuze kube lula kuwe, kukho umatshini wokuhlamba kwindawo yokuhlambela enezixhobo ngokupheleleyo.
Ngaphambi kwesakhiwo kukho iindawo zokupaka zikawonke-wonke ezikhoyo.
5.0 · Izimvo eziyi-48
Le ndlu yimizuzu embalwa yokuhamba ukusuka kwiibhari, iiresityu, ii-pubs kunye neevenkile zegrosari.
Eyona paki idumileyo yolonwabo, iTološka šuma, kunye nepaki entle yaBafundi ikufuphi.
Kukuhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kwiShopping mall Bazar enemarike eluhlaza. I-Delta City Shopping Mall (elona ziko lokuthenga likhulu eMontenegro) limalunga nemizuzu engama-20 yokuhamba umgama.
ITempile yoVuko lukaKrestu imalunga ne-15 min uhamba umgama.
I-35-40 imizuzu yokuhamba ukuya kwisikwere esikhulu, isithili sembali sasePodgorica, i-rock Moraca riverbank kunye nenduli yaseGorica iya kukunika amava angenakulibaleka oya kunandipha.
Isikhululo sebhasi singaphaya kwendlela
Sihlala ebumelwaneni ukuze sikwazi ukuphendula ngokukhawuleza nakweziphi na izicelo zakho ezongezelelweyo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Podgorica